- मेलम्चीमा १५५ जनाको आँखाको शल्यक्रिया
मेलम्चीमा १५५ जनाको आँखाको शल्यक्रिया
सिन्धुपाल्चोकः सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नगरपालिका तिलगंगा सामुदायिक आँखा केन्द्रको प्राङ्गणमा बृहत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
पुस ४ गतेदेखि आँखा शिविर संचालन गर्दै स्वास्थ्य चौकी दुवाचौर, एकृकीत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र पिपले, इन्द्रवती जनसेवा समिति टिपेणी, हेलम्बू गाउँपालिका किउल, चिलाउनेघारी स्वास्थ्य केन्द्र हेलम्बू, स्वास्थ्य चौकी तिनधरे बाडे गाउँ, स्वास्थ्य चौकी सिपाघाटमा गरी आठ स्थानमा आँखा परीक्षण शिविर संचालन गरिएको थियो ।
सो शिविरबाट शल्यक्रिया गर्नुपर्ने मोतियाविन्दु रोगीहरुको अपरेशनको लागि छनौट गरी पुस १२ र १३ गते तिलगंगा आ“खा प्रतिष्ठानको वरिष्ठ आँखारोग विशेषज्ञ डा. सृजना अधिकारीको नेतृत्वमा १५५ जना महिला तथा पुरुषहरुको सफल शल्यक्रिया सम्पन्न गरेका थिए ।
उक्त शल्यक्रियामा ६० वर्षदेखि ९१ वर्षसम्मका जेष्ठ नागरिकहरु रहेका छन् । शल्यक्रियापछि आँखा देख्न सफल स्थानीयबासीहरुले आयोजकलाई धन्यवाद दिए । शल्यक्रियामा टाढाटाढाबाट आएका विरामीहरुलाई बसाई र खानाको समेत व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण जोशीले संचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए ।
कार्यक्रम संयोजकका अनुसार पुस १३ गते सोही स्थानमा बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको थियो । स्वास्थ्य शिविरमा बालरोग, जनरल, छाती तथा क्षयरोग, हार्डजोर्नी र खकार परीक्षण गरी निःशुल्क औषधी वितरण गरिएको नेरेसो सिन्धुपाल्चोक शाखाका सभापति राजेन्द्रमान ताल्चाभडेल बताए ।
शिविरमा सिन्धुपाल्चोका विभिन्न नगर वा गाउँबाट ४२२ जना महिला, पुरुष र बालबालिकाहरुलेले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए भने ४२ जनाले खकार परीक्षण गरिएको थियो ।
जिनएक्सपोर्ट परीक्षणका लागि ७ जनाको केन्द्रीय ल्यावमा पठाएकोमा कुनैपनि पोजेटिभ नआएको नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था भक्तपुर शाखाका सभापति राम सिख्वले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुलाई सहज हुने हेतुले तिलगंगा सामुदायिक आँखा केन्द्र मेलम्चीलाई दाताहरुबाट प्राप्त ५ थान व्हिलचेयर सहयोग प्रदान गरिएको मेलम्ची न.पा. ११ वडाका वडाध्यक्ष रुद्रप्रसाद दुलालले बताए ।
कार्यक्रमको आयोजकहरुमा तिलगंगा सामुदायिक आँखा केन्द्र मेलम्ची, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुपाल्चोक शाखा, इन्द्रेश्वर उच्च मा.वि. मेलम्ची, मेलम्ची नगरपालिका, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था भक्तपुर, पिन नेपाल, उपकार सेवा नेपाल रहेको कार्यक्रम संयोजक जोशी बताए ।
प्रकाशित मितिः सोमबार २१ पौष,, ०८:००